Sheekada Ridwaan: Magafayaashu had iyo jeer been bay sheegaan
Ridwaan waa nin da’ yar oo ku koray Hargeysa, Somalia. Wuu ku qanacsanaa nolosha uu la wadaago qoyskiisa, iyo asxaabtiisa. Wuxuu doonayay in uu noqdo saxafi. Gelinka dambe waxa uu ciyaari jiray kubbad asxaabtiisa na bun ayuu la cabi jiray. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu helay firiin ay asxaabtiisa Yurub tagtay u soo marisay baraha bulshada. Waa na ta (fariinta) qastay.
– Maalin iyo habeen waxaan arki doonaa sawirada asxaabtayda ku nool Yurub, waxay ku noolaayeen nolol wanaagsan. Saaxiibbadayda la safra tahriibiyaasha ee ku nool Yurub waxay had iyo jeer igu dhahaan, 'mustaqbal wanaagsan ayaa kuu yaal halkaan. Soo bax. ”Taasi waa goortii aan fikradda ka helay noloshaas cusub iyo mustaqbal wanaagsan. Waxaan isku dayaa inaan qayb ka noqdo noloshii asxaabtaydii ku jirtay. ”
Waxa uu la xidhiidhay magafe kaa oo u qaban-qaabiyay safar uu ku sii mari doono Itoobiya, Suudaan, iyo Liibya. Wuxuu u sheegay Ridwaan in uu noqon doono safar fudud oo bilaa dhibaato ah, wakhti badan na aanu qaadan doonin. Ridwaan waxa uu maqlay xan hoose oo ku saabsan dhibaatada uu safar kani leeyahay, laakiin magafihii baa u sheegay in aanu rumaysan warar kaas.
“Waxaan waydiiyay magafihii in ay jirto wax murugo leh, jidh-dil, dhimasho ama dhibaatooyin kale. Laakiin magafuhu weligii runta kuu sheegi maayo. Magafuhu dantiisa ayuun buu had iyo jeer ba eegtaa. Ma jirto sabab aan ka ahayn in uu lacagta doonayo oo kaliya. Markaa weligii runta kuu sheegi maayo.”
Markii uu Suudaan gaadhay, Ridwaan waxa uu xaqiiqsaday wax alla wixii magafuhu u sheegi jiray in ay been ahaayeen. Waxa la geeyay xero dadka lagu sii dillaalo halkaas oo uu ku arkay dad la jidh-dilayo iyo dumar lagu tacadinayo. Dabadeed waxa loo sii gudbiyey dillaaliin kale oo Liibiya jooga, kuwaas oo isaga iyo boqol qof oo kale meel ku xidhay. Waxa lagu yidhi qoyskiinii wac una sheeg in ay soo bixiyaan USD 8,000. Si xun ayaa loo jidh-dili jiray maalin kasta ilaa lacagta laga soo dirayay. Dabadeed waxa la geeyay xeebta halkaas oo qaybta dambe ee safar ahayd, ilaa Yurub laga gelayo. Waxay ahayd dooni aad u buuxda oo 130 qof saaran yihiin. Iyagaa na isku rakibtay doonta.
“Doonta rakibisteedu wakhti badan buu qaatay, ilaa iftiinkii Liibiya uu naga libdhayay. Habeenkii oo dhan waanu soconay. Qofka doonida naakhuudaha ka ahaana muu garaneyn jihada saxda ah. Badda dhexdeeda ayaanu wareegaalaysannay.”
Baddu way kacsanayd doontu na waxay ay bilowday in biyaha soo dayso. Ugu dambayn waxa soo bedbaadiyay Markab Liibiyaan ah oo dib ugu soo celiyay xeeliga badda. Dabadeed Ridwaan hal sanno ayuu ku qaatay xabsiga dhexe oo xaaladdiisu aad u ba’an tahay. Markii loo soo bandhigay in uu Somalia dib ugu laabto, wuu aqbalay. Hargeysa ayuu dib ugu soo noqday, Halkaas oo qoyskiisii si diirran ugu soo dhaweeyeen. Maanta, Ridwaan waxa uu yidhi haddii uu ogaan lahaa waxa uu maanta ogyahay, weligii safar sidaa u khatar badan u muu sii mareen ilaa Liibiya.
“Safarkani saamayn weyn ayuu ku yeeshay noloshayda. Ma aha wax aad si fudud ku ilaawi karto. Waxyaabo badan ayaan wajahay oo aanan filaneyn sida jidh-dil, xanuun iyo boob. Waxaan la kulmay dhibaatooyin badan oo aanan suuraysan karin markii hore. Wixii aan maqli jiray iyo wixii aan sawiran jiray ba been bay ahaayeen.”